ကိုယ်ထဲတွင် အဆိပ်တောက် များနေပြီဟု သိနိုင်သော လက္ခဏာများ - CeleLove
August 16, 2019 Cele Love ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ 0
လူတွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆိပ်အတောက်တွေဟာ နေရာတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။ နေ့တိုင်းသောက်နေတဲ့ရေ၊ စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ အသုံးပြုနေတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာရှိတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အချိန်တိုင်းမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ၀င်ရောက်နေပြီး အချိန်ကြာလာရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ စုပုံလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် ….. ။ အဆိပ်အတောက်ပမာဏနည်းနေရင် သိပ်စိတ်ပူစရာမရှိပေမယ့် ပမာဏအများကြီးစုပုံလာရင်တော့ ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပြီး အသက်သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ရောဂါတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူတိုင်းသတိထားရမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေစုပုံနေရင် ဖြစ်လာမယ့် လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော် …. ။
ဆိုးဆေးအသုံးပြုထားတဲ့အစားအသောက်တွေ၊ သဘာဝမဟုတ်တဲ့အနံ့၊အရသာထည့်သွင်းထားတဲ့ အစားအသောက်တွေစားသုံးတာက ၀မ်းချုပ်စေပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဝမ်းချုပ်နေတယ်ဆိုရင် ဆိုးဆေး၊အရောင် နဲ့ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ အရသာပါဝင်နေတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ အရက်သောက်တာကို ဆင်ခြင်ပြီး ရေများများသောက်ပေးပါ … ။
ရာသီဥတုပူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ချွေးထွက်တဲ့အခါ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးတောင်မတိုးတော့လောက်အောင် အနံ့အရမ်းဆိုးနေမယ်ဆိုတာကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲအဆိပ်အတောက်တွေများနေလို့ဖြစ်ပါတယ် …. ။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေများလာတဲ့အခါ အချိန်တိုင်းလိုလိုပင်ပန်းနေတတ်တယ်၊ ဒီတိုင်းနေရင်းတောင် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုကို လွယ်လွယ်နဲ့မှတ်လို့မရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအဆိပ်အတောက်တွေက ကောင်းမွန်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့အာဟာရတွေမစုပ်ယူနိုင်အောင် တားဆီးထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အဆိပ်အတောက်တွေကို အရင်ဖယ်ရှားဖို့လိုပြီး ၊ အဆိပ်အတောက်တွေကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုရင်တော့ အာဟာရပြည့်ဝတာတွေဘယ်လောက်ပဲစားပေးပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ကမစုပ်ယူနိုင်ပါဘူး …. ။
အရင်ကဘာမှမဖြစ်ဘဲ ရုတ်တရက်အဆစ်တွေနာလာတာမျိုး၊ လမ်းနည်းနည်းလျှောက်ရုံနဲ့ ခြေထောက်တွေနာလာတာ၊ ရောင်လာတာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် အသည်းမှာ အဆိပ်အတောက်တွေများနေလို့ပါ … ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆိပ်အတောက်တွေများနေတဲ့အခါ cortisol hormone ထုတ်လုပ်မှုများလာတာကြောင့် ညဘက်တွေမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ အိပ်မပျော်တာမျိုး၊ အိပ်နေတုန်း ခဏခဏနိုးနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် …. ။
အသည်းမှာ အဆိပ်အတောက်များနေတဲ့အခါ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးထွက်စေပါတယ်။ သွားတိုက်တာ၊ ခံတွင်းနံ့ပျောက်ဆေးသုံးတာတောင် အနံ့ဆိုးတွေ မပျောက်ဘူးဆိုရင် အဆိပ်အတောက်တွေစုပုံနေလို့ပါပဲ …. ။
(၇)- အရေပြားမှာ အလာ့ဂျစ်ဖြစ်ရင်
လူတချို့မှာ တစ်ခုခုနဲ့မတည့််လို့ အလာ့ဂျစ်ဖြစ်တတ်တာမျိုးရှိပြီး တချို့ကျတော့လည်း အလာ့ဂျစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှားပါတယယ်။ အလာ့ဂျစ်မဖြစ်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်က အလာ့ဂျစ်ဖြစ်လွယ်တာမျိုး၊ အသားအရေယားယံတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲအဆိပ်အတောက်တွေများနေလို့ဖြစ်ပါတယ် …. ။
အဆိပ်အတောက်တွေက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အာဟာရတွေမစုပ်ယူနိုင်အောင် ဟန့်တားနေတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေမရရှိဘဲ ဆံပင်တွေအရမ်းကျွတ်တာ၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေ ကြွပ်ဆတ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် …. ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေဖြစ်နေပြီဆ်ိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေ ဖြေဖို့ ဒီအချက်တွေကိုလုပ်ပါ။ရေများများသောက်ပါ။ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း၊ လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ .. ။ ဆိုးဆေးနဲ့ သဘာဝမဟုတ်တဲ့အရောင်၊အနံ့ပါတဲ့အစားအစာတွေရှောင်ပါ။ညအိပ်ခါနီးတိုင်း သွားတိုက်ပါ၊သွားပွတ်ကြိုးသုံးပြီး သွားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ၊ လျှာဆေးပါ။
ကိုယျထဲတှငျ အဆိပျတောကျ မြားနပွေီဟု သိနိုငျသော လက်ခဏာမြား
လူတှကေို ဒုက်ခပေးနိုငျတဲ့အဆိပျအတောကျတှဟော နရောတိုငျးမှာရှိနပေါတယျ။ နတေို့ငျးသောကျနတေဲ့ရေ၊ စားနတေဲ့အစားအသောကျတှနေဲ့ အသုံးပွုနတေဲ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှမှောရှိတဲ့အဆိပျအတောကျတှကေ ခန်ဓာကိုယျထဲကို အခြိနျတိုငျးမှာ နညျးမြိုးစုံနဲ့ ဝငျရောကျနပွေီး အခြိနျကွာလာရငျ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ စုပုံလာတာပဲဖွဈပါတယျ ….. ။ အဆိပျအတောကျပမာဏနညျးနရေငျ သိပျစိတျပူစရာမရှိပမေယျ့ ပမာဏအမြားကွီးစုပုံလာရငျတော့ ကိုယျတှငျး အင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှကေို ဒုက်ခပေးနိုငျပွီး အသကျသစေနေိုငျလောကျတဲ့ ရောဂါတှကေို ဖွဈပှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒီတော့ လူတိုငျးသတိထားရမယျ့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဆိပျအတောကျတှစေုပုံနရေငျ ဖွဈလာမယျ့ လက်ခဏာတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျနျော …. ။
ဆိုးဆေးအသုံးပွုထားတဲ့အစားအသောကျတှေ၊ သဘာဝမဟုတျတဲ့အနံ့၊အရသာထညျ့သှငျးထားတဲ့ အစားအသောကျတှစေားသုံးတာက ဝမျးခြုပျစပေါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ နစေ့ဉျရကျဆကျဝမျးခြုပျနတေယျဆိုရငျ ဆိုးဆေး၊အရောငျ နဲ့ သဘာဝမဟုတျတဲ့ အရသာပါဝငျနတေဲ့အစားအစာတှနေဲ့ အရကျသောကျတာကို ဆငျခွငျပွီး ရမြေားမြားသောကျပေးပါ … ။
ရာသီဥတုပူလို့ပဲဖွဈဖွဈ ခြှေးထှကျတဲ့အခါ ခြှေးနံ့ပြောကျဆေးတောငျမတိုးတော့လောကျအောငျ အနံ့အရမျးဆိုးနမေယျဆိုတာကလညျး ခန်ဓာကိုယျထဲအဆိပျအတောကျတှမြေားနလေို့ဖွဈပါတယျ …. ။
ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဆိပျအတောကျတှမြေားလာတဲ့အခါ အခြိနျတိုငျးလိုလိုပငျပနျးနတေတျတယျ၊ ဒီတိုငျးနရေငျးတောငျ စိတျရှုပျထှေးနပွေီး အကွောငျးအရာတဈခုကို လှယျလှယျနဲ့မှတျလို့မရဖွဈနတေတျပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုဖွဈတာဟာ ခန်ဓာကိုယျထဲကအဆိပျအတောကျတှကေ ကောငျးမှနျတဲ့ဗီတာမငျနဲ့အာဟာရတှမေစုပျယူနိုငျအောငျ တားဆီးထားတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈနတေယျဆိုရငျတော့ အဆိပျအတောကျတှကေို အရငျဖယျရှားဖို့လိုပွီး ၊ အဆိပျအတောကျတှကေိုမဖယျရှားဘူးဆိုရငျတော့ အာဟာရပွညျ့ဝတာတှဘေယျလောကျပဲစားပေးပမေယျ့ ခန်ဓာကိုယျကမစုပျယူနိုငျပါဘူး …. ။
အရငျကဘာမှမဖွဈဘဲ ရုတျတရကျအဆဈတှနောလာတာမြိုး၊ လမျးနညျးနညျးလြှောကျရုံနဲ့ ခွထေောကျတှနောလာတာ၊ ရောငျလာတာတှဖွေဈလာတယျဆိုရငျ အသညျးမှာ အဆိပျအတောကျတှမြေားနလေို့ပါ … ။
ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆိပျအတောကျတှမြေားနတေဲ့အခါ cortisol hormone ထုတျလုပျမှုမြားလာတာကွောငျ့ ညဘကျတှမှော လှယျလှယျနဲ့ အိပျမပြျေျာတာမြိုး၊ အိပျနတေုနျး ခဏခဏနိုးနတောမြိုးတှဖွေဈတတျပါတယျ …. ။
အသညျးမှာ အဆိပျအတောကျမြားနတေဲ့အခါ ခံတှငျးအနံ့ဆိုးထှကျစပေါတယျ။ သှားတိုကျတာ၊ ခံတှငျးနံ့ပြောကျဆေးသုံးတာတောငျ အနံ့ဆိုးတှေ မပြောကျဘူးဆိုရငျ အဆိပျအတောကျတှစေုပုံနလေို့ပါပဲ …. ။
(၇)- အရပွေားမှာ အလာ့ဂဈြဖွဈရငျ
လူတခြို့မှာ တဈခုခုနဲ့မတညျ့လို့ အလာ့ဂဈြဖွဈတတျတာမြိုးရှိပွီး တခြို့ကတြော့လညျး အလာ့ဂဈြဖွဈတယျဆိုတာရှားပါတယယျ။ အလာ့ဂဈျြမဖွဈတတျတဲ့သူတဈယောကျက အလာ့ဂဈြဖွဈလှယျတာမြိုး၊ အသားအရယေားယံတာမြိုးတှဖွေဈလာပွီဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျထဲအဆိပျအတောကျတှမြေားနလေို့ဖွဈပါတယျ …. ။
အဆိပျအတောကျတှကေ ခန်ဓာကိုယျအတှကျကောငျးမှနျတဲ့အာဟာရတှမေစုပျယူနိုငျအောငျ ဟနျ့တားနတောကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှအေတှကျလိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျတှမေရရှိဘဲ ဆံပငျတှအေရမျးကြှတျတာ၊ လကျသညျး၊ ခွသေညျးတှေ ကွှပျဆတျနတောမြိုးတှဖွေဈလာပါလိမျ့မယျ …. ။
အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့အခကျြတှဖွေဈနပွေီဆျိုရငျ ခန်ဓာကိုယျထဲက အဆိပျအတောကျတှေ ဖွဖေို့ ဒီအခကျြတှကေိုလုပျပါ။ရမြေားမြားသောကျပါ။ ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျး၊ လမျးလြှောကျလကေ့ငျြ့ခနျးမှနျမှနျလုပျပါ .. ။ ဆိုးဆေးနဲ့ သဘာဝမဟုတျတဲ့အရောငျ၊အနံ့ပါတဲ့အစားအစာတှရှေောငျပါ။ညအိပျခါနီးတိုငျး သှားတိုကျပါ၊သှားပှတျကွိုးသုံးပွီး သှားသနျ့ရှငျးရေးလုပျပါ၊ လြှာဆေးပါ။